Reasons कारणहरू सामाजिक शिक्षामा डिग्री अध्ययन गर्न गठन र अध्ययन
माइट निक्यूसा | 18/05/2021 08:00 | प्रशिक्षण
El सामाजिक शिक्षक उहाँ एक पेशेवर हुनुहुन्छ जसले शहर र शहरहरूमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुहुन्छ। सबै व्यक्तिहरू महत्त्वपूर्ण छन् र व्यक्तिहरूको एकीकरणले साझा राम्रोलाई मजबूत गर्दछ। यद्यपि त्यहाँ केहि समूहहरू छन् जुन सामाजिक स्तरमा केही प्रकारको अदृश्यताको पीडा हुने जोखिममा बढी जोखिमपूर्ण छ। आजको समाजमा, उदाहरणका लागि, वृद्ध व्यक्तिहरूले युगवादको सामना गर्छन् जुन पूर्वाग्रहहरू देखाउँदछ जुन बुजुर्गहरूको अव्यावसायिक छवि चित्र गर्दछ।
शिक्षक मानवतावाद मार्फत सामाजिक विकास प्रबर्धन गर्ने कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्छन्। कार्यहरू कार्यक्षेत्र भित्र प्रासंगिक गर्न सकिन्छ बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवा वा बुढेसकाल। तपाईं अन्य कमजोर समूहहरूलाई पनि समर्थन गर्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक शिक्षामा डिग्री किन अध्ययन गर्ने? प्रशिक्षण र अध्ययनमा हामी तपाईंलाई केही विचारहरू दिन्छौं।
1 १. परिवर्तनको एजेन्ट हुनुहोस्
22मानहरू
3 People's. व्यक्तिको जीवनमा सुधार ल्याउनुहोस्
4 Ant. लगातार सिक्ने
5 Pre. रोकथाम उपायहरू
१. परिवर्तनको एजेन्ट हुनुहोस्
समाजमा गहिरो रूपान्तरणलाई प्रबर्द्धन गर्न, यो लक्ष्यको पछि लाग्ने परियोजनाहरूमा नेतृत्वलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ। तर यी सुविधाहरूको परिवर्तन अवसरको परिणाम होईन, तर योजना बनाएर जन्मिएको हो। त्यसकारण, आवश्यक प्रस context्गमा सर्नको लागि वर्तमान प्रस of्गको निदान तयार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यस परिवर्तनको रणनीतिमा भाग लिन सामाजिक शिक्षकसँग आवश्यक प्रशिक्षण छ.
त्यहाँ स्तम्भहरू छन् जुन सामाजिक राम्रोको रूपमा खुशीलाई बढावा दिन आवश्यक छ। मानहरू सिद्धांतहरू हुन् जसले सह-अस्तित्व सुधार गर्दछ र संवादलाई सुदृढ बनाउँछ। तर, साथसाथै, यो पनि आवश्यक छ कि त्यहाँ पेशेवरहरू छन् जसले अरूलाई मानको महत्त्वको प्रशिक्षण दिन्छन् जुन कहिलेकाँहि पुनःसक्रिय गर्न सकिन्छ। मानव अधिकारहरूको रक्षा गर्ने मानहरू आवश्यक छन्.
People's. व्यक्तिको जीवनमा सुधार ल्याउनुहोस्
सामाजिक शिक्षकले अवलोकन गर्दछ कि कसरी, एक विशेष टोलीको कामको माध्यमबाट, नयाँ स्रोतहरू पहुँच गर्ने व्यक्तिको जीवनमा एक महत्वपूर्ण मोड आउँछ। परिवर्तन तुरून्त होईन तर विकास प्रक्रिया छ। यो सहायताले निर्भरतालाई बढावा दिदैन तर व्यक्तिको स्वायत्तता र सशक्तीकरणलाई बढावा दिन्छ त्यो, राम्रो तयारी गरेर, नयाँ उपकरणहरूको साथ दैनिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुहोस्।
प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूपमा अद्वितीय र फरक हुन्छ, त्यसैले, यो विविधता प्रत्येक दिन अघिल्लो भन्दा फरक छ भनेर बुझ्नेहरूको व्यवसायिक तालिकालाई समृद्ध बनाउँदछ। एक सामाजिक शिक्षकको यात्रा कहिले समान हुँदैन, किनभने प्रक्रिया र परिस्थिति विशेष हुन्छ।
Ant. लगातार सिक्ने
सामाजिक शिक्षकले अरूलाई मद्दत गर्दछ तर, एकै समयमा, निरन्तर कथाहरूसँग सम्पर्कबाट सिक्छ जुन उसलाई जटिल वास्तविकता देखाउँदछ। सामाजिक शिक्षकले उनीसँग जाने र मार्गनिर्देशकहरूको आत्म-सुधार क्षमताबाट सिक्छ।
सबै व्यक्तिको अनुकूल परिस्थिति हुँदैन, तर सबै खुशी हुनुपर्दछ। र यो प्रक्रिया सम्भव बनाउने बाटो फेला पार्न आवश्यक छ। सामाजिक शिक्षाले महत्त्वपूर्ण दार्शनिक मूल्य भएको प्रश्नहरूको जवाफ प्रदान गर्दछ।
Pre. रोकथाम उपायहरू
सामाजिक शिक्षक एक पेशेवर हो जसले हस्तक्षेप गर्दछ जब जोखिमको अवस्था देखा पर्दछ। उसको संलग्नतामा उनले त्यो पक्षलाई अदृश्यताको प्लेनमा नराख्ने बनाउँदछ: उसले परिस्थितिलाई आवाज दिन्छ जुन खास आवश्यकतालाई अनुकूलित समाधानको आवश्यक पर्दछ। तर एक सामाजिक शिक्षक प्रतिक्रियाशील कार्य गर्दैन, तर सक्रियतापूर्वक। यसरी, सामूहिक कल्याणलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले रोकथाम योजनाहरूमा पनि भाग लिन्छ। यस तरिकाले, केहि समूहहरूको सम्भावित बहिष्कारबाट बच्न सम्भव छ जुन विशेष कारणका लागि यस अवस्थाबाट पीडित हुने बढी जोखिममा छ।
सामाजिक शिक्षकको काम आजको समाजमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ जुन परिवर्तन र स of्कटको समयबाट गुज्रिरहेको छ। कुनै श doubt्का बिना, यो अत्यधिक व्यावसायिक कामको उच्च मानवीय मूल्य छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » हाम्रो बारेमा » प्रशिक्षण » Reasons कारणहरू सामाजिक शिक्षामा डिग्री अध्ययन गर्न